Njikọ Mkpụrụ German: Ọdịnala German nke Ogologo maka ndị na-eto eto nduku Russia - Magazin "Usoro Ọkpụkpọ"
Solana bụ ụlọ ọrụ ezinụlọ nwere nke na-azụlite na ịmị mkpụrụ nduku kemgbe 1905, jiri nlezianya na-echekwa ọdịnala azụmaahịa ma na-enyefe ahụmịhe na ọhụụ ọhụụ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.
Isi ebumnuche nke ozuzu Solana bụ ịzụlite ụdị akụ na ụba mara mma ma dị irè nke na-eguzogide ọgwụ ọtụtụ ọrịa nke nje, nje bacteria na fungi na-akpata, ụdị dị iche iche nke na-enye mkpụrụ osisi kwụsie ike na-enweghị ngwa nke ngwaahịa na ngwaahịa na fatịlaịza, nke na-enyere ichebe gburugburu ebe obibi, ebe iche dị iche site na ezigbo uto, mma ngosi nke tubers na àgwà ndị dị mkpa maka oge a na nduku ahịa.
A na-eme nhọrọ ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri nke anyị na Germany na Holland, nke dị na ọnọdụ pụrụ iche na ọnọdụ ihu igwe pụrụ iche iji zere ibute ọrịa nje na ọrịa fungal.
Nchịkọta SOLANA gụnyere ụdị dị iche iche dị iche iche, oge chara acha, maka maka mpaghara ihu igwe dị iche iche: okpokoro okpokoro zuru ụwa ọnụ, iche maka ịsacha, nhicha, nkwakọ ngwaahịa, mmepụta nke ibe, fries french, starch, n'isi na etiti. N'oge ahụ, e nwere ụdị 25 na State Register of Varieties of Russian Federation.
Na 2021, edenyere akwukwo ohuru abuo: EDISON na KING RUSSET di iche iche.
Solana na-enye poteto mkpuru karịrị mba iri anọ gburugburu ụwa. Na Russia, akụkọ ihe mere eme nke Solana malitere na 40 na mbu izipu na imepụta poteto yana ndị mmekọ Russia. Na 1991 ụlọ ọrụ ahụ nyefere akwụkwọ ntinye akwụkwọ na Steeti Sort Commission maka ndebanye aha ọhụrụ ROSARA na ZEKURA. Ma na 1994, ụlọ ọrụ Russia na German jikọrọ aka mepụta mkpụrụ poteto, ZAO Samara-Solana, ka Solana ghọrọ otu n'ime ndị izizi ịchọpụta mmepụta nke poteto mkpụrụ na Russia yana ihe karịrị afọ 1995 nwere na-amị mkpụrụ nduku na mba anyị. A na-emepụta poteto ndị a na-etinye n'ime obodo dịka ụkpụrụ ogo German na ihe ndị GOST RF chọrọ.
Companylọ ọrụ Solana na-echebara ihe ndị ahịa Russia chọrọ ma na-arụ ọrụ ịzụlite na-eburu n'uche mmasị ndị ahịa Russia. N'ihi ya, ndị na-eto eto Russia na ndị na-azụ ahịa nwere mmasị na ụdị KOROLEVA ANNA, RED LADY, LABELLA, BELMONDA maka ọdịdị ha dị elu, mkpụrụ dị elu na uto.
Kemgbe 2011, na Russia, ahịa nke ụdị Solana niile edebara aha site na German Mkpụrụ Alliance, nke na-enye ndụmọdụ na nkwado teknụzụ, na-agbasi mbọ ike iji hụ na uru nke ndị ahịa anyị, na-ahazi ule ngosipụta ka onye ọ bụla nwee ike ịnwale ma họrọ ụdị akụ na ụba mara mma maka ala na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, yana nwekwara ike ịmatakwu ahịrị niile nke ụdị nduku Solana.
Ndị ọkachamara nke German Seed Alliance na ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike mgbe niile, na-enye ndụmọdụ maka nhọrọ nke ụdị, na-enye nkwado teknụzụ, na-agbanwe maka eziokwu ọhụrụ, na-agbasi mbọ ike ịnye onyinye maka ndị na-akụ nduku na-ezute ahịa ahịa nke oge a. Ọrụ ruru eru na usoro nkeonwe na-eme ka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa German Seed Alliance.
Tags: German Mkpụrụ Alliancemkpụrụ nduku
Mpaghara Bryansk mụbara ụda nke mbupụ nduku site na oge 4,6
Industrylọ ọrụ nhazi ọka miri emi: nsonaazụ nke afọ na atụmanya mmepe